Mogadishu Journal » Faransiiska oo ku dhawaaqay xiliga la qaadayo xayiradii Xuduudaha
Faransiiska oo ku dhawaaqay xiliga la qaadayo xayiradii Xuduudaha
Bayaan ka soo baxay Wasaaradaha Arrimaha gudaha iyo tan arrimaha dibadda ee Dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in 15 bishan June oo ku beegan Isniinta soo socota ay qaadi doonaan xayiraadahii saarnaa xuduudaha dalkaasi Faransiiska, warka ayaa intaasi lagu daray in ugu horeeyn la ogolaaday in dadka ka socda wadamada midowga yurub loo ogolaaday in ay galaan gudaha dalkaani.
“Marka la eegay horumarka wanaagsan ee xaaladda caafimaad ee ka soo ifaya Faransiiska, iyadoo la raacayo talooyinka Guddiga caafimaadka Yurub, dalka Faransiiska waxuu go,aansaday ayain uu qaado xayiradii Xuduudaha 15-ka June” ayaa lagu yiri Bayaanka.
Warka ayaa intaa ku daray in socdaalayaasha ka socda waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, San Marino, Switzerland iyo Vatican, ay awood u yeelan doonaan inay galaan gudaha Faransiiska.
Ugu danbeeyntii Bayaanka ayaa lagu xusay in xayiraadaha dhanka safarka ay ku sii jiri doonaan xudduudda ay la leeyihiin waddamada Spain iyo Boqortooyada Ingiriiska, iyada oo la raacayo talooyinka iyo mabaadii’da Guddiga caafimaadka Yurub.
Yaa ka mid ah Madaxda ka qaybgalaysa wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya, ee ka furmaya wadanka Djibouti.
Madaxweynaha Jabuuti iyo taliyaha AFRICOM oo ka wada hadlay howlgalada ka socda Soomaaliya.